Fitandroana ny filaminana :: Nisafo tampoka tamin’ny alina ireo minisitra • AoRaha
Misy hevitra iray
Fitandroana ny filaminana Nisafo tampoka tamin’ny alina ireo minisitra
Manenjana ireo minisitra telo, tompon’andraikitra voalohany amin’ny fitandroana ny filaminana. Nandritra ny roa alina izao no nanaovan’izy ireo fisafoana tampoka ny teto an-drenivohitra.
“Tsy mionona amin’ny fanomezana toromarika izahay fa mijery ny fampiharana ety an-kianja”, hoy ny jeneraly Ravalomanana Richard, Sekreteram-panjakana miadidy ny Zandarimariam-pirenena, teny Ambohibao, afak’omaly.
“Tsy mipetra-potsiny ny mpitondra fa miezaka hatrany mba hilaminan’ny mponina rehetra na an-drenivohitra na ambanivohitra. Misy ny toromarika efa nomena ireo mpitandro filaminana rehetra na zandary na polisy. Raha misy ny lesoka dia hiarahanay telo mirahalahy manarina”, hoy kosa ny jeneraly Rakotonirina Léon Richard, minisitry ny Fiarovam-pirenena.
Ny alin’ny talata dia teny amin’ny faritra iva izay mafana amin’ny tsy fandriampahalemana no nidinan’ireo tompon’ andraikitra nojerena. “Faritra hiasan’ny polisy itony faritra itony ka izahay eo anivon’ny Polisim-pirenena dia hanao ny fomba rehetra mba hampitahorana ny jiolahy. Horakofanay avokoa ny faritra iva rehetra fa indrindra ireo heverina ho mafana amin’ny asan-jiolahy na andro na alina.”, hoy ny Contrôleur général Rafanomezantsoa Roger, minisitry ny Filaminam-bahoaka.
Fifidianana ben’ny tanana Feno kandidà ihany ireo kaominina dimy amby sivifolo sy eninjato sy arivo
Pilo kely • Raharaham-pirenena
Bao tsy mivily • Raharaham-pirenena
Ady amin’ny kolikoly Niatrika fivoriana tany ivelany ny tale jeneralin’ny Bianco
06/06/2019 à 15:36
hita sy tapa fa manao ny ezaka rehetra ny mpitandro filaminana , izay tarihin’ireo lehibeny , mampandry fahalemana ny eto andrenivohitry gasikara , efa misy ny vokatra , kanefa mbola tsy ampy fa mila hampitomboina hatrany , ny tanjona lehibe , dia mba tsy hisy intsony asan-jiolhay fa handry voho ny vato ny mponina rehetra
Fitsinjaram-pahefana :: Takin’ny Sefafi ny fanovàna ny fomba fifidianana ben’ny tanàna